A. R. RAHMAN: ဘဝ - သမိုင်း & အောင်မြင်မှုပုံပြင် - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
A. R. Rahman: ဘဝ - သမိုင်း & အောင်မြင်မှုပုံပြင်
အိန္ဒိယတွင်အဝတ်စုတ်မှစည်းစိမ်သို့ကူးသွားသောအဆိုတော်၏သမိုင်းရှိသည်။ သူသည်ဂီတနယ်ပယ်တွင်ထူးခြားမှုကိုဖန်တီးခဲ့ရုံသာမကသူ၏အသံဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများကိုပါအံ့သြတုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမပါပဲ အေ R. Rahman က သူသည်ထူးခြားသောဂီတစွမ်းရည်ဖြင့်ရုပ်ရှင်အတွက် Grammy Awards ကဲ့သို့ကြီးမားသောအချို့သောသူများကိုအိမ်တွင်ဂုဏ်ပြုမှုများစွာရရှိစေခဲ့သည်။ Slumdog Millionaire (၂၀၀၈) “ လူများကသူသည်ဂီတနှင့်ဂီတအတွက်မွေးဖွားခြင်းခံနေရသည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်။
Rahman ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင်ဂီတကြွယ်ဝသောတမီးလ်မိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည် A.S Dilip Kumar က ။ သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တမီးလ်နာဒူးဒ် (ယခု Chennai) တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်သည်မလေးရာလမ်နှင့်တမီးလ်သီချင်းများကိုတေးရေးဆရာ၊ ထို့ကြောင့်, R. R. Rahman ဟာအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာသူ့အဖေ၏စတူဒီယိုသို့စတင်ခဲ့ပြီးနူးညံ့သောအရွယ်၌သူထံမှဂီတစရိုက်များလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ၄ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်စန္ဒယားတီးခတ်မှုကိုစတင်သင်ယူခဲ့ပြီးသူ၏ကံကြမ္မာအတွက်၊ အသက် ၉ နှစ်အရွယ်တွင်ဖခင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Rahman ၏မိသားစုသည်ငွေရှာဖွေရန်သူ၏ဖခင်မှပိုင်ဆိုင်သောဂီတပစ္စည်းများကိုငှားရမ်းခဲ့ရသည်။ Rahman သည်အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းလာသည့်အထိမိသားစုအကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူသည် A R Rahman ဟုလူသိများလာသည်။
ဂီတကိုသူအလွန်စိတ်ဝင်စားသည်က Zakir Hussain ကဲ့သို့သောဂီတသမားများနှင့်ကမ္ဘာ့ခရီးစဉ်များတွင်သူနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ဖြစ်သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူကသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဂီတကျောင်းကနေအနောက်တိုင်းဂန္ထဝင်ဂီတဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဘောလီးဝုဒ်မှမည်သည့်ရုပ်ရှင်ကိုမဆိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အချိန်ကောင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူသည် jingles, ကြော်ငြာများနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကိုရေးသားခြင်းဖြင့်သူ၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးချိုး
သူသည် Dilip အဖြစ်လူသိများသော ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်သူသည် Akkwyn ကုမ္ပဏီများအတွက်နာရီအသစ်များကိုဂီတလုပ်ငန်းတွင်ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
၂ နှစ်အကြာတွင်သူ၏ပထမဆုံး jingle မှတ်တမ်းကိုရရှိပြီးနောက်သူသည်“ ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုအသေးစား” ဟူသောအမည်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ Panchathan Record အင်း သူ့အိမ်၏အိမ်နောက်ဖေး၌ရှိ၏ '။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်စတူဒီယိုသည်အလွန်အရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိပြီးကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးအဆင့်မြင့်သောအသံသွင်းစတူဒီယိုဖြစ်သည်။
Rahman သည်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏ထူထောင်သူဒါရိုက်တာများနှင့်မကြာမီစတင်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီး၊ မဏိ Ratnam သူကသူ့ရုပ်ရှင်အတွက်သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ' အနီေရာင် 'ဒီရုပ်ရှင်အတွက် 1992. ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခံရဖို့ခဲ့ A.R. Rahman သည်သူ၏လုပ်ငန်းအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့ပြီးကမ်းလှမ်းမှုများသည်ဒါရိုက်တာအမျိုးမျိုးမှသူ၏လမ်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
A.R. Rahman သည်ဘောလီးဝုဒ်တွင်မစတင်မှီတမီးလ်ရုပ်ရှင်များတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူ၏ပထမဆုံးဟိန္ဒူကားမှာ“ Rangeela (1995) 'နှင့်နောက်ပိုင်း' ဘုံဘေ (1995) '' ဒေးလ် (၁၉၉၈) '' ဘာသာစကား (၁၉၉၉) '' Lagaan (2001) '' Rockstar (2011) 'နှင့်များစွာသောအခြား။
သူသည်အမျိုးသားရုပ်ရှင်ဆု ၄ ခု၊ ဂရမ်မီဆု ၂ ဆု၊ အကယ်ဒမီဆု ၂ ဆု၊ ၁၅ Filmfare ဆု ၁၅ ဆု၊ တောင်ပိုင်း ၁၆ Filmfare ဆုနှင့် BAFTA ဆုတို့ကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
ဂီတနယ်ပယ်တွင်သူပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်သူသည်အိန္ဒိယအစိုးရမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တတိယအမြင့်ဆုံးအရပ်သားဆု Padma Bhushan ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Madras နှင့် Isai Puyal ၏ Mozart
သူ၏တောင်အိန္ဒိယပရိသတ်များကသူ့ကို“ မိုဇတ်မဒရပ်စ်” နှင့်“ Isai Puyal” တို့၏အမည်ပြောင်များက“ ဂီတမုန်တိုင်း” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သူ၏နာမကိုလည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိသြဇာအရှိဆုံးလူ ၁၀၀ ၏အချိန်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သူသည်ကိုယ်ပိုင်ဂီတတံဆိပ်ကိုနာမည်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် KM ဂီတ ။ သူသည်ဟိန္ဒူနှင့်တမီးလ်သီချင်းများနှင့်သာမကတရုတ်နှင့်ဂျပန်ဂန္ထဝင်ဂီတများကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင် Slumdog Millionaire အတွက်သူသည်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုနှင့်အကယ်ဒမီ ၂ ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းဘွဲ့များရရှိခြင်းဖြင့်သူသည်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်ပထမဆုံးအိန္ဒိယဖြစ်လာခဲ့သည်။ သီချင်းများ“ ဂျိုင်းဟို 'နှင့်' အို…ငါ ဒီရုပ်ရှင်ကားကသူ့ကိုအိန္ဒိယမှာစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်အောင်သာမကနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုလည်းပါရရှိစေခဲ့တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်
၂၀၀၉ ခုနှစ်ထုတ် စုံတွဲများဆုတ်ခွာ 'သူ၏ပထမဆုံးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ သူသည်စမ်းသပ်မှုအတွက် BMI London Award ကိုရရှိခဲ့သည်။
သူသည်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံထုတ်လွှင့်ပေးသော Dolby အသံစနစ်ဖြစ်သော ၇.၁ နည်းပညာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူသည်လူငယ်များ၏နှလုံးကိုဖမ်းစားရုံသာမကမျိုးဆက်အားလုံးနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးလူများ၏နှလုံးသား၌လည်းနေထိုင်သည်။
AR Rahman သည် Saira Banu နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးယခုဇနီးမောင်နှံသည် Khatija၊ Rahima နှင့် Ameen တို့၏သားသမီး ၃ ယောက်၏ဂုဏ်ယူသောမိဘများဖြစ်သည်။ သူသည်ဟိန္ဒူဘာသာမှမွေးဖွားခဲ့သော်လည်းဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အသက် ၂၀ တွင်အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့ရသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုဂုဏ်ပြုခြင်းအားဖြင့် Mara Paas Maa Hai သူသည်မိခင်အား ၈၁ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင်အထူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
သူသည်ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်တီဘီရောဂါအတွက် WHO မှကမ္ဘာ့အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
A.R. Rahman သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမြဲတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် Yusuf Islam နှင့်အတူအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသတင်းသီချင်းတွင်ကလေးများအားကယ်တင်ခြင်းတွင်ကူညီခဲ့သည်။
ravish kumar ndtv ၏ဇနီး
သူက de က de villiers ဖြစ်ပါတယ်
မွေး shivani နေ့စွဲ bk